मेयरको टिकट नपाएपछि केशव स्थापितले भने- म जोगी मान्छे, मलाई मतलब छैन | Dainik Sanjal
Home राजनीति मेयरको टिकट नपाएपछि केशव स्थापितले भने- म जोगी मान्छे, मलाई मतलब छैन
मेयरको टिकट नपाएपछि केशव स्थापितले भने- म जोगी मान्छे, मलाई मतलब छैन
१९ बैशाख, काठमाडौं । पूर्वमेयर केशव स्थापित काठमाडौं महानगरपालिको मेयरको प्रमुख दावेदारमध्ये एक थिए । मेयरको दाबी गर्दै सञ्चार माध्यममार्फत चुनाव प्रचार-प्रचारमा जुट्ने उनी पहिलो हुन् । तर, नेकपा एमालेले उनलाई पत्याएन । र, मेयरका लागि विद्या सुन्दर शाक्यलाई टिकट दिएको छ ।
अब काठमाडौंका पूर्वमेयर समेत रहेका स्थापितले के गर्लान् ? यो धेरैलाई लागेको प्रश्न हो ।यसबारे सोध्दा संघीय समाजवादीबाट एमालेमा फर्किएका स्थापितले अनलाइनखबरसँग भने, ‘पार्टीले विद्यासुन्दरलाई दियो । उहाँको पनि तयारी होला, पार्टीको पनि तयारी होला । पार्टीमा जे भूमिका हुन्छ, त्यो निभाउँछु ।’
तपाई स्वतन्त्र उम्मेदवारी त दिनुहुन्न नि ? मंगलबार बेलुका ४ बजेतिर अनलाइनखबरले यस्तो प्रश्नमा उनले भने, ‘छैन, छैन । म जोगी मान्छे, मलाई मतलव छैन ।’आफूहरुलाई अरु दलले प्रस्ताव गरे पनि आफूले चासो नदिएको भन्दै उनले आफ्नो अरु नै काम रहेको बताए ।काठमाडौं मेयरको उम्मेदवारका लागि दाबी गरे पनि जिल्ला र प्रदेशबाट उनको नाम आएको थिएन । तर, उम्मेदवार छान्न सोमबार बसेको स्थायी कमिटी बैठकमा शंकर पोखरेलले स्थापितको नाम पेश गरे, जसलाई बामदेव गौतमले समर्थन गरे ।स्थापित चर्चित व्यक्ति भएकाले एमालेले उनलाई टिकट दिने सम्भावना थियो । तर, एमाले पार्टी पंक्ति उनीप्रति सकारात्मक छैन । पार्टी बाहिरबाट उम्मेदवार नबनाउन जिल्ला र प्रदेश तहका नेताहरुले दबाव समेत दिएका थिए ।
नेता स्थापितले विद्या सुन्दर शाक्यलाई शुभकामना दिएका छन् ।